Mmekọrịta Usoro Usoro oge na Squad | Martech Zone
Squad bụ mmepe ihe Google docs bụ ụlọ ọrụ ime ụlọ. Na Squad, otu mmepe gbasaa gafee ụwa nwere ike imepe otu faịlị ahụ, rụọ ọrụ na ya n'otu oge, ma kpaa nkata gbasara ndezi. Enweghị nzukọ ogologo nyocha nyochaa ebe ndị otu na-agbagharị gburugburu, na-enyefe ibe ha edezi, na-agbakọ ma na-agbagha mmezigharị ndị ahụ… Squad na-eme ma ọ bụrụ na enweghị mbọ.
Squad bụ web-based, Software dị ka ọrụ ngwọta nke ahụ bụ dị oke ọnụ. Ọ bụrụ na ị bụ otu onye ọrụ, ị nwedịrị ike iji ya n'efu! Maka $ 39 / ọnwa ị nwere ike nweta ngwungwu otu maka ndị otu 5.
Tags: nchịkọta akụkọmmekotasquad